यो पुस्तिका रोलर्स: प्रकार, आवेदन
डिजाइन फर्नीचर, भण्डारण उपकरण, गैरेज, साना निर्माण सुविधाहरु अक्सर पुस्तिका रोलर्स को उपस्थिति पनि समावेश छ। यो तत्व यसको आधार र फर्श गर्न क्षति बिना वस्तुको सजिलो आन्दोलन गर्न अनुमति दिन्छ। यस मामला मा, त्यहाँ फरक खाता परिचालन सुविधाहरू मा लिएर, त्यस्तो तत्व को उत्पादन गर्न नजिकिंदै छन्। त्यसैले, कैबिनेट लागि रोलर्स चिल्लो चलिरहेको सुनिश्चित गर्न आवश्यक र गेट लागि एक मोडेल यांत्रिक भार सहन पर्छ।
जहाँ रोलर्स प्रयोग?
यस्तो सामान को मुख्य आवेदन फर्नीचर उत्पादन समावेश छ। सानो आकार, विश्वसनीयता र लेआउट को शुद्धता - टेबल, वार्डरोब, सोफे र कुर्सी को निर्माताहरु द्वारा मूल्यवान छन् बस गुणहरू। विषय को निर्माण मा रोलर्स को उपस्थिति सुविधाजनक, यो उत्प्रेरित छ, ढोका र नियन्त्रण बक्से बनाउँछ। र यो मात्र घर फर्नीचर, तर पनि व्यावसायिक उपकरण लागू हुन्छ। विशेष मा, पुस्तिका रोलर्स भण्डारण रैक र व्यापार रसद को संरचना मा प्रयोग गरिन्छ। यी उपकरणहरू को विशिष्ट विभाग निर्माताहरु गेट खण्डहरू रोजगार। रोलर्स यस्तो मोडेल आकार, उच्च वेयर प्रतिरोध र फर्श मा कोमल प्रभाव अझ विशाल छन्।
फर्नीचर को टुक्रा ब्रेक संग एक निश्चित पिभोट तंत्र र पाङ्ग्रा संग प्रदान गरिन्छ। विशेष क्लिप यी प्रणाली को प्रत्येक लागि प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ, पाङ्ग्रा र पिभोट संयन्त्र लक गर्न प्रयोग एक ठाउँमा उपकरण मा वस्तु पूर्ण fixation गर्न। तर यस रोलर्स सधैंभरि immobilized रहनेछ भन्ने होइन। द्वारा सरल हेरफेर, प्रयोगकर्ता अनलक प्रदर्शन गर्न सक्छन् र फर्नीचर सार्न। यो सिद्धान्त अनुसार सुसज्जित प्रयोग गरिन्छ जो खण्ड-अलमारियाँ, को लागि गाइड छन् स्लाइड बेयरिंग वा बल तत्व। यो व्यवस्था सम्भव कैबिनेट को काम भागहरु को सेवा जीवन कायम राख्न बनाउँछ र एकै समयमा फर्नीचर टुक्रा कार्यात्मक र व्यावहारिक छ बनाउन। तर, पाङ्ग्रा फरक र उच्च स्थायित्व र थप स्थिर सवारी आराम, हुन सक्छ अब यो मुख्य विषय रूपमा सेवा गर्नेछन्।
ढोका लागि रोलर
ढोका संरचना को विशेषताहरु आधारमा, आफ्नो सामान troughs विभिन्न संख्या संग गाइड हुन सक्छ। साथै, यस्तो संयन्त्र विभाजित छन् र स्थान को आधार मा, रेडियल रेखा र यन्त्रहरूमा विभाजन उल्लेख छैन। रोलर्स मा कक्ष ढोका सामान्यतया कम पुस्तिका व्यवस्था, जसमा वेब एकीकृत प्रदान गर्नुहोस्। यस मामला मात्र सही ठाडो स्थिति खण्डहरू मा माथिल्लो रेल। यस पुस्तिका मा troughs को उल्लेख नम्बर लागि जाँदा, प्रायजसो मा उडान मोबाइल पखेटा संख्या पारस्परिक रहेको छ।
देखि खण्ड को आन्दोलन एक विमान मा हुन्छ विन्यास, एक गर्त संग रेल स्लाइड लागि प्रयोग गरिन्छ। को रोलर्स मा ढोका को एक सेट मा कम र माथिल्लो रेल द्वारा पूरक हुन सक्छ। यी प्रणाली को विशेष सुविधाहरू तिनीहरूले काम क्लासिक डिजाइन जस्तै, बरु दुई canvases एक पत्ती छ सेवा भन्ने तथ्यलाई समावेश गर्नुहोस्। सामान्य सञ्चालन समयमा यस मामला खण्डमा प्रत्येक अन्य काम क्षेत्र मा कदम छैन।
ढोकाहरू स्लाइड लागि रोलर
रूपमा पाङ्ग्रा भाग सामान्यतया तथाकथित गेट टर्मिनल वा forme रोलर्स लागि प्रयोग गरिन्छ। यो हटाउन सकिने तत्व, को लागि निश्चित जुन पुस्तिका प्रोफाइल। यसबाहेक, यस्तो बीम पाङ्ग्रा चिल्लो बन्द flaps प्रदान यात्रा। को चेसिस को सामान्य निर्माण मा वर्तमान र स्लाइड ढोकाहरू धुलो, हिउँ र पुस्तिका संयन्त्र अन्य विदेशी तत्व को प्रवेश समावेश एक प्लग अतिरिक्त रोलर। यसलाई जोड गर्न र मानक संस्करण रूपमा ढोका स्लाइड लागि रोलर्स भेद कि परिचालन विशेषताहरु महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो भागहरु वेयर प्रतिरोध र सुरक्षा थर्मल, को पाठ्यक्रम, धेरै सुरक्षा मार्जिन को उच्च स्तर छ। यो करङहरु र पार्श्व रोक्दछ उपस्थिति हुन सक्छ विशेष - यी गुणहरू निर्माण सामाग्री तर पनि मात्र होइन संरचनात्मक तत्व कारण। लक्षित सिस्टम आधारमा पक्ष को रूप मा संरचना र साथै हवाई जहाज को पहिये प्रदान गर्न सक्छ नरम लक पाङ्ग्रा लागि रोलिंग र विशेष जाल रोक्छ।
भित्री आवाजलाई मोडेल
यस प्रकारका मोडेल ती अवस्थाहरूमा जहाँ इरादा वृद्धि भार प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको हो। सामान्यतया यो जसको व्यास 6.2 25 सेमी देखि दायरा रोल। एक होल्डर रेल संग उचित स्थापना सहायक Assuming बारेमा 215 kN एक axial लोड सामना गर्न सक्छन्। जब उच्च वेयर प्रतिरोध यस्तो constructs सजिलो मर्मतका छन्। विशेष, हटाउँदै र सजिलै प्रतिस्थापन गर्न उत्तरदायी भित्री आवाजलाई पुस्तिका रोलर्स। अवतरण अंक को मुद्दा आकार र यी भिडियो प्रयोग गर्न बहुमुखी बनाउने, एक मानक ढाँचा छ। तर, यो एक विशिष्ट चेसिस लागि क्लिप को व्यक्तिगत चयनको लागि आवश्यकता खत्म गर्दैन।
यस्तो मोडेल 2.6 20 सेमी देखि लिएर एक व्यास छ। सानो समर्थन प्रणाली, तिनीहरूले विधानसभा बोकेका दुई एकल पङ्क्ति बल हो। को tapered रोलर बेयरिंग प्रयोग प्रकार को प्रमुख तत्व। परिस्कृत शक्ति संशोधन पनि कन्सोल र मानक तंत्र प्रयोगको लागि उपयुक्त हो। पिन गर्न पुस्तिका रोलर्स सबै पनि Eccentric तत्व संग पूरा बजार मा उपलब्ध छन्। यस्तो मोडेल सामान्यतया पत्र "ई" को रोलर को विशिष्टीकरण मा चिनो लगाइएको छन्। यस्तो उपकरणहरू को लाभ को क्याम अनुयायी बेला रोलिंग सतह संग स्थिर अन्तरक्रिया खुलिरहेको छ जो को ठाडो आन्दोलन को संभावना समावेश गर्नुहोस्।
के सामाग्री बेहतर छ?
जो विश्वव्यापी सामाग्री पाठ्यक्रम फरक आवेदन विज्ञापनहरु, छैन उत्पादित हुन सकेन। कार्यालय फर्नीचर उद्योग, उदाहरणका लागि, पलियामाइड र polyurethane घटक प्रयोग। यस्तो उत्पादनहरु सम्पर्क पत्र को सर्वोत्कृष्ट विशेषताहरु खुलिरहेको छन्, र सोही समयमा पर्याप्त बल प्रदान गर्नुहोस्। होम फर्नीचर लागि सामान्यतया प्राविधिक र शारीरिक गुणहरू बाहेक नेत्रहीन आकर्षक छन् जो बीच पुस्तिका रोलर्स, प्रयोग गरिन्छ। इष्टतम एक ठोस जग र रबर वा एउटै को प्लास्टिक को लोचदार बाहिरी आवरण संयोजन हुन मानिन्छ - त्यस्तो उद्देश्यको अखंड उपकरण व्यावहारिक निर्मित लागि भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। निस्सन्देह, उपकरण भण्डारण र गेट रोलर्स लागि जंग गर्न एक उच्च प्रतिरोध आवश्यक पर्दछ। यस मामला मा, फाइबर सिसा संग प्रबलित प्लास्टिक को वस्तुहरु टिप्ने लागि प्रयोग। सबैभन्दा पनि टिकाउ मोडेल 1 भन्दा बढी टन सामना गर्न अनुमति दिने, इस्पात बनेको छन्।
पुस्तिका को स्थापना विशेष हार्डवेयर प्रयोग आफूलाई सजिलै प्रदर्शन रेलहरू भने, रोलर्स पूर्ण गैर-separable हुन सक्छ। तर नियम अपवादहरूको छन्। उदाहरणका लागि, समर्थन संयन्त्र वार्डरोब मा weakest विशेषज्ञहरु तल रोलर्स विश्वास गर्छन्। रोलर्स मा बन्धन समारोह स्क्रू, latches वा बक्स, सम्बन्धित प्वालहरू मा तय जुन सञ्चालन। तर यो नियामकहरु यी तत्व भ्रममा महत्वपूर्ण छ। disassembly लागि मात्र गैर-काम हार्डवेयर तत्व एउटा नयाँ हटाउन र यसको ठाउँमा स्थापना गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, प्रतिस्थापन गाइड रोलर र सेटिङ सँगसँगै हुनुपर्छ। एउटै दराज को मामला मा सामान्य पर्खाल र स्क्रू अवतरण प्रयोग गरेर फर्नीचर ढोका बीच अंतर आवश्यक समायोजन गर्नुहोस्।
फर्नीचर र यसको सञ्चालन हार्डवेयर को चयन मा सधैं देखिने छ। सामान्यतया विशिष्ट मात्र सजावटी तत्व र विवरण व्यावहारिक समारोह देखि बेवास्ता गरिन्छ। यो कि चलिरहेको रेल मा लुकाउन फर्नीचर ढोका लागि यस्तो तत्व हो, र गाइड छ, तर धेरै जिम्मेवार कार्यहरू प्रदर्शन। यो वृद्धि को विफलता व्यर्थ सारा मामला बनाउन सक्छ - कम्तिमा ती परिस्थितिमा मरम्मत बिना गर्न सक्नुहुन्न। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको माउन्ट संरचना, फाटक, रैक र अन्य संयन्त्र मा पुस्तिका रोलर्स को भूमिका छ। सहायक उपकरण को सावधान हेरविचार यसको घटक जीवन विस्तार र मुख्य विषय को सेवा जीवन वृद्धि हुनेछ।
संयुक्त ताप बयलर - नियन्त्रणमा घरमा तापमान!
टाइल कसरी प्रयोग गर्ने: चरण निर्देशनहरूको, सल्लाह र दृश्यहरू द्वारा चरण
बयलर Zota: निर्दिष्टीकरण, फोटो र समीक्षा
HUSQVARNA 323LD - बहुमुखी Trimmers। समीक्षा र विवरण
ताररहित mowers,: सबै भन्दा राम्रो मोडेल, सुविधाहरू, दर्जा को समीक्षा
मानव जोइन्टहरूमा को वर्गीकरण। संरचना मा जोइन्टहरूमा को वर्गीकरण
टमाटर लागि के पोटाश मल optimally फिट?
Laminate लागि व्यावसायिक हेरविचार
को जाडो zucchini लागि क्यान्ड। भविष्यको लागि हामी तयार
स्प्रेयर ओपी-2000: लक्षण, उद्देश्य।
दबाइ 'Aminazin'। प्रयोगको लागि निर्देशन
को खन्याउन लसुन, yellower छैन? सिक्न र गर्न
Bursztyn के हो? मूल र गुण निर्धारण
भुटानका राज्य। नक्सामा भूटान
Loafers: तिनीहरूले बोक्नु आवश्यक के छ र के
नोवोसिबिर्स्क मा पार्क "ग्यालिलियोले": वर्णन, चासो ठाउँहरू, फोटो